အောင်မြင်ရေးသော့ချက် ခုနစ်ချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အောင်မြင်ရေးသော့ချက် ခုနစ်ချက်
Posted by manawphyulay on Nov 20, 2010 in News |6comments
၁။ ယနေ့သည်ကား မိမိဘ၀၏ နောက်ဆုံးအသက်ရှင်နေရသောနေ့ဖြစ်သည်ဟု သဘောပိုက်ကာ မိမိလုပ်လိုသမျှ၊ လုပ်စရာရှိသမျှတွေကို အစွမ်းကုန် ကြိုးစားလုပ်ပါ။
၂။ မိမိတစ်ဦးတည်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လိုအပ်သော အကျိုးအာနိသင်များ ပြည့်ပြည့်၀၀ ခံစားရလေ့မရှိပါ။ အခြားသူများ၊ မိတ်ဆွေကောင်းများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အကူအညီများကိုပါ ရယူလုပ်ကိုင်ပါ။
၃။ များသောအားဖြင့် လူတွေဟာ မိမိတို့၌ ကိုယ်ပိုင်ရှိပြီး မီးခဲပြာဖုံးဉာဏ်ပညာနှင့် ခွန်အားရဲ့ ဆယ်ပုံတစ်ပုံကိုသာ သုံးစွဲနေလေ့ရှိကြတယ်။ မိမိရဲ့ ဉာဏ်အားနှင့်ကိုယ်အားတို့ကို အစွမ်းကုန် အပြည့်အ၀ထုတ်နုတ်လုပ်ကိုင် သုံးစွဲကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ မိမိကိုယ်တိုင် အံ့သြ၍ မကုန်သော ရလဒ်များကို မုချ ခံစားကြရပါလိမ့်မယ်။
၄။ လူအများအကျိုးကို ရှေးရှုဆောင်ရွက်ပါ။ ပြည်သူများအတွက် လိုအပ်နေသော ကိစ္စရပ်များ၊ စီမံကိန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါ။ မိမိကြောင့် လူအများ အကျိုးခံစားရလေလေ၊ မိမိတွင်လည်း ပိုမိုအကျိုးခံစားရလေလေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၅။ သင်၏စိတ်ကူးအိပ်မက်၊ မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်အစစ်က ဘာလဲ။ ဆုံးဖြတ်ချက် သန္နိဌာန် ချမှတ်လိုက်ပါ။ အဲသည်နောက်မှာ သဲသဲမဲမဲ မရမနားလုပ်ပါ။ ကိုယ့်ပန်းတိုင်ဟာ ကိုယ်မူလ ထင်သလောက် မဝေးကွာတာကို မုချတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
၆။ ဇွဲထား၍ တွန်းအားပေးကာ ရှေ့သို့သာ ဆက်လုပ်သွားပါ။ ကြိုးစားသွားပါ။ လိုရာမဖြစ်သေးသရွေ့ ကာလပတ်လုံး ကြာရှည်စွာ အလျှော့မပေး၊ အရှုံးမပေးဘဲ သည်းခံဇွဲတင်းရုန်းကန်သွားပါ။ ကိုယ့်ကို တားဆီးနေသမျှသော အခက်အခဲများ၊ ရန်သူများသည် မုချ တစ်စတစ်စ လက်ပန်းကျ လက်လျှော့သွားကြသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။
၇။ အောင်မြင်ခြင်းဆိုသည်မှာ မိမိ၏ဉာဏ်အား၊ ကိုယ်အားအပြည့်အ၀ အစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်မှ ရရှိတတ်ပါတယ်။ မလိုအပ်သောကိစ္စများ၊ ပကာသနများ၌ မိမိရဲ့အချိန်၊ ငွေနှင့် အင်အားတွေကို မဖြုန်းတီးမိရန် အထူးသတိပြုပါ။ အလည်အပတ်သွားခြင်း၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ဗန်းပြ၍အချိန်ဖြုန်းခြင်း၊ ရုပ်ရှင်၊ လောင်းကစားလိုက်စားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
(ယနေ့သည်ကား မိမိဘ၀၏ နောက်ဆုံးအသက်ရှင်နေရသောနေ့ဖြစ်သည်ဟု သဘောပိုက်ကာ မိမိလုပ်လိုသမျှ၊ လုပ်စရာရှိသမျှတွေကို အစွမ်းကုန် ကြိုးစားလုပ်ပါ။)
ma naw phyulay (ခ) လေးဖြူနှမရေ
ယနေ့သည်ကား မိမိဘ၀၏ နောက်ဆုံးအသက်ရှင်နေရသောနေ့ဖြစ်သည်ဟု သဘောပိုက်ကာ မိမိလုပ်လိုသမျှ၊ လုပ်စရာရှိသမျှတွေကို အစွမ်းကုန် ကြိုးစားလုပ်ပါ။ တို့အတွက်နောက်ဆုံးနေ့လို့သိခဲ့ယင်တို့ကတော့တရားအားထုတ်မယ် ကောင်းမှု့လုပ်ခဲ့တာလေးတွေဘဲပြန်စဉ်စားနေတော့မယ်ကွယ်…… နောက်တာပါ……. ကောင်းပါတယ်တော်တော်စိတ်ဝင်စားဘို့ကောင်းတဲ့အချက်တွေပါတယ်…..
ကိုရင်မောင် ပြောသလိုဘဲ.. နောက်ဆုံးအချိန်ဆို.. တရားလေးနဲ့ အေးအေချမ်းချမ်းနေတော့မယ်။
မလုပ်ရင် သေမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးနဲ့ လုပ်သင့်တယ်။ အဲဒီလို အသုံးမျိုးဆို ပိုမှန်လေမလား။
ဥပမာ.. ရေဖလားထဲမှာ ရေအပြည့်နဲ့ ဒီတိုင်း သယ်သွားရင် ရေတွေ လမ်းမှာ ဖိတ်စင်နိုင်ပေမဲ့.. ဘုရင်ကြီးက လုလင်တယောက်ကို ရေ တစက်ဖိတ်တာနဲ့ သတ်စေလို့.. အမိန့်တော်များ ကြားသိဘူးရင်.. ထိုလူသည် ပန်းတိုင် ရောက်သည် အထိ ရေတစက် မဖိတ်စင်ဘဲ သယ်နိုင်၏လို့.. ဘယ်မှာလဲတော့ မသိဘူး.. မှတ်မိနေတယ်။
သေမှာ ကြိုသိတာနဲ့ မလုပ်ရင်သေရမှာနဲ့ မတူဘူး။
အဲဒီ (၇) ချက်လုံး လိုက်နာနိုင်ရင်တော့ မုချအောင်မြင်မှာ သေချာတယ် …
ကိုပေါက် မန်းလေးရေ………. တကယ့်လက်တွေ့ သေမှာ သိနေရင် ဘုရားမှတစ်ပါး အာရုံမထားတော့ရင် အရမ်းအေးချမ်းတာ သိရှိလာပါလိမ့်မယ်။ မနော ဟိုတစ်လောက အစာအိမ်အူအတက်ယောင်တာ ရုံးကနေ အိမ်က ကားငှားပြန်တော့ လမ်းမှာ သွားပြီတောင် အောင်းမေ့မိတယ်။ ဒီအချိန်မှ ဘာစဉ်းစားမိလဲသိလား လမ်းမှာများ တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် ငါ ဘာလုပ်မလဲဆိုပြီး ဘုရားပဲ အာရုံပြုလိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ စိတ်က တည်ငြိမ်မှု ပိုဖြစ်လာပြီ ဝေဒနာကို ရှုလိုက်တဲ့အခါ စိတ်တွေ လန်းဆန်းပြီး သေမှာ မကြောက်တော့တဲ့ ခံစားမှုကို ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။
မဖြူ ရေးတဲ့အောင်မြင်ရေးအချက် တွေထဲမှာ